Acetylcholine (အက်စီတိုင်းကိုလင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Acetylcholine (အက်စီတိုင်းကိုလင်း)
Acetylcholine (အက်စီတိုင်းကိုလင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Acetylcholine (အက်စီတိုင်းကိုလင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Acetylcholine ကို မည်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
Acetylcholine ဟာ အတွင်းတိမ်ခွဲစိတ်မှု (သို့) အခြား မျက်လုံးခွဲစိတ်မှုတွေ အပြီးမှာ မျက်စိသူငယ်အိမ်ကျဉ်းစေဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Acetylcholine ဟာ parasympathomimetics ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အာရုံကြော စေ့ဆော်မှု သယ်ပို့ပေးခြင်းအားဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Acetylcholine ကို ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်ပါသလဲ။
ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါပဲ အိမ်မှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ ဆရာဝန်ကို တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Acetylcholine ကို အသုံးမပြုခင် ပြင်ဆင်ပြီး ချက်ချင်း အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ဟာ ဖွင့်ပြီးရင် မသုံးဖြစ်တဲ့အရည်တွေကို လွှင့်ပစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်စိ ခွဲစိတ်မှုကနေ ပြန်မကောင်းလာမချင်း (သို့) အမြင်အာရုံပုံမှန် ပြန်မဖြစ်မချင်း စက်ကိရိယာတွေ မောင်းနှင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
Acetylcholine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Acetylcholine ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Acetylcholine ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။
Acetylcholine ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Acetylcholine ကိုမသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
Acetylcholine (သို့) Acetylcholine ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ရင်
မျက်နှာ၊ ပါးစပ်၊ လျှာ၊ ကိုယ်ခန္ဓါ အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေ ရောင်ခြင်း
အကွက်ထခြင်း၊ အရေပြား ယားယံခြင်း
Acetylcholine ကို ရက်လွန်နေရင် (သို့) ထုတ်ပိုးမှု ပေါက်ပြဲနေရင် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ဆေး ရက်လွန်နေရင် (သို့) ပျက်စီးနေရင် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ပြန်ပေးပြီး လွှင့်ပစ်ခိုင်းသင့်ပါတယ်။
အကယ်၍ ဒီဆေးသောက်သင့် မသောက်သင့် မသေချာရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Acetylcholine က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်တွေရှိပြီး သင့်ကို စိုးရိမ်စေတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
ခေါင်းမူးခြင်း၊ ရီဝေဝေဖြစ်ခြင်း (သွေးပေါင်ကျခြင်းကြောင့်)
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက Acetylcholine နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
Acetylcholine ဟာ သင်အခု လောလောဆယ် သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေ အားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာ၀ ဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အချို့ဆေးတွေကို အတူအသုံးမပြုသင့်သော်လည်း အချို့နေရာတွေမှာတော့ ဓါတ်ပြုမှု ရှိရင်တောင်မှ အတူအသုံးပြုသင့်တဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာတော့ သင့်ဆရာဝန်ဟာ ဆေးပမာဏ ပြောင်းလဲပေးခြင်း (သို့) လိုအပ်တဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ အခြားဆေးတွေ သောက်နေတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Acetylcholine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Acetylcholine က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Acetylcholine နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Acetylcholine ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေး အခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှု ပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
ယခုဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ နေရာတွင်အစားထိုးရန်မဟုတ်ပါ။ ဆေးမသောက်သုံးခင်မှာ ဆရာဝန်နှင့်ဖြစ်စေ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့်ဖြစ်စေ အမြဲ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Acetylcholine ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
သင့်ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏကို ညွှန်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှု မရှိပဲ ဆေးကို အိမ်မှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
ကလေးငယ်တွေမှာ Acetylcholine ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
ကလေးလူနာများမှာ ဘယ်လောက် အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာ အတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှု ရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာ စိတ်ချရမှုအနေအထားကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Acetylcholine ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
Acetylcholine ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
• ဆေးရည်၊ Intraocular ၊ as chloride: 20mg (mannitol ပါဝင်သည်)
အရေးပေါ် အခြေအနေ သို့မဟုတ် ဆေးပမာဏ လွန်သွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာ အရေးပေါ် ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ။
Acetylcholine ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Eye Angiogram (မျက်လုံးသွေးကြောပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးခြင်း)
Syncope (နှလုံးရောဂါ အဓိကလက္ခဏာများ)
ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်သော မျက်စိ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ- ဆီးချိုကြောင့် အမြင်လွှာပျက်စီးခြင်း
ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်သော မျက်စိနောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ – အမြင်လွှာကွာကျခြင်း